777-200ER FMC UPDATE 1 days ago3လ #1856
download ၏ comment အပိုင်း၌လှည့်စားပြီးနောက်, ငါအဖြေတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ download နှင့်အတူပါ ၀ င်သော 777fmc.dll ဖိုင်ကိုသင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကူးယူ / paste လုပ်ထားသည်။ ချေးငွေအားလုံးသည် Ariel Terkeltoub ဖြစ်သည်။ ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Notepad ကိုအသုံးပြုပြီးဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Windows 10. ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
FMC သို့မဟုတ် VC ၏ယေဘုယျအားဖြင့်ပြproblemsနာများရှိသည့်သင်တို့အားလုံးအတွက် </SimBase.Document> tag မတိုင်မီအောက်ပါလိုင်းများကိုထည့်ပါ။
<Disabled> မှားသည် </Disabled>
<Path> module များ \_ jb777loader.dll </Path>
<Path> module များ \_ jb777_fmc.dll </Path>
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: တေးရေး, dyttffrr44
777-200ER FMC UPDATE 1 days ago2လ #1862
ကျွန်ုပ်သည် .dll ဖိုင်ကိုရှာရန်အခက်အခဲများရှိပါသည်။
ငါက Windows 64 နဲ့ 10bit desktop ကိုသုံးတယ်။
777-200ER FMC UPDATE 1 လ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1863
ငါထင်တယ်၊ ၇၇၇fmc.dll ကိုမတည်းဖြတ်ဘူး၊ dll.xml ဖိုင်ထဲမှာဒီမျဉ်းတွေကိုရေးမယ်။
777-200ER FMC UPDATE 1 လ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1864
777-200ER FMC UPDATE 1 လ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1865
အထက်ပါလိုင်းများကို DLL.xml ဖိုင်တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် -
ကို C: \_ အသုံးပြုသူများ \_ YOURUSERNAME \_ AppData \_ Roaming \_ MicrosoftFSX
Notepad ဖြင့် DLL.xml ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးအချက်အလက်ထည့်ပါ၊
777-200ER FMC UPDATE 1 လ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1866
ကျွန်ုပ်ဤလမ်းကြောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်“ အက်ပ်တာတာ” ဟုအမည်တပ်ထားသောဖိုင်မရှိပါ ဒါကပြaနာလား ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သနည်း။ နင်မသိဘူးဆိုရင်ငါနားလည်တယ်
777-200ER FMC UPDATE 1 လ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1867
ဘယ်တော့မှစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ဖိုင်တွဲတစ်ခုထက် folder ကိုသွားမယ့်အစားလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရိုက်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်။
777-200ER FMC UPDATE နာရီအကြာက 1 လ 23 #1868
ကုဒ်အသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ဖိုင်၏သဘောသဘာဝနှင့်ကျွန်ုပ်ဖိုင်များကိုမည်သို့တည်းဖြတ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အရန်ကူးယူထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ package ကို uninstall နှင့် reinstall ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအရန်ကူးတစ်ခုဖန်တီး !!!!!!
777-200ER FMC UPDATE နာရီအကြာက 1 လ 14 #1869
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းအတွက်တောင်းပန်ပါ။ သို့သော်သင်၏အမှန်တကယ် 'မိတ္တူ' ကိုမျှဝေရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပျံနှင့်ပတ်သက်။
ဒါဟာထွက် sorting နှင့်အတူကူညီသင့်ပါတယ်။
ငါ (ငါမတိုင်မီနှင့်ထို့အပြင်ပြီးနောက်) ရှိခဲ့သည့် screenshots တွေကိုကြိုးစားငါစေလွှတ်မည်။
777-200ER FMC UPDATE4ပတ် 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့် #1871
ပထမမျက်နှာပြင်တွင်ရွေးချယ်မှု (၃) ခုရှိသည်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသလား။ : dll, dll.xml နှင့် DLL_XML
တစ်ခုချင်းစီတွင်အမှန်တကယ်စာရင်းသွင်းထားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် DLL_XML ၏မျက်နှာပြင်ကိုသာယူသည်။
0.954 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်